STTO INTOX Archives - Ọ NA-EKPAYR. AYBỌR.
ọrụ kwụsịrị ọnwa ole na ole tupu CAN 2021
TELES RELAY	 Jul 31, 2021 0
N'ịbụ onye e nyefere n'aka ụlọ ọrụ Canada Magil, ọrụ nke ọrụ nkwado nkwado nke mbata ọwụwa anyanwụ nke obodo Douala akwụsịla kemgbe ọtụtụ ọnwa. "A kwụsịrị ọrụ ahụ n'ihi enweghị mbinye aka nke ...
Cameroon na -achọ ijeri 13 iji mepụta nde nde m000 nke osisi kwa afọ site na ...
TELES RELAY	 Jul 30, 2021 0
National Development Plantation Development Programme (PNDF), nke bidoro ọrụ ya na Julaị 23, 2021, bu n'obi imepụta, site na 2045, ọtụtụ osisi nde nde 2,5 nke ...
ngosi ahia iji gbaa ndị otu SND30 ume
TELES RELAY	 Jul 29, 2021 0
“Site na Strategy Akwụkwọ maka Uto na Employment (DSCE) ka National Development Strategy (SND 2020-2030). Olee atụmanya maka Cameroon? Nke a bụ isiokwu nke mbipụta nke 10 nke lonlọ Mmanya de action gouvernementale…
Mba, Francis Ngannou adaghị na isi ndu na Black Panther 2
TELES RELAY	 Jul 28, 2021 0
2bọchị abụọ, ọtụtụ mbipụta na netwọkụ mmekọrịta na-egosi na onye ọkpọ ọkpọ, UFC onye mmeri ọkaibe n'ụwa abatala isi ọrụ nke ihe nkiri Black Panther 2. Anyị enyochala gị. Ihe…
Fécafoot na-ekwupụta mmalite nke asọmpi ahụ ka ahapụchara 200 nde FCFA na enyemaka nke…
TELES RELAY	 Jul 27, 2021 0
Mgbe ihe karịrị ọnwa abụọ kwụsịrị, Njikọ Njikọ na 1 na 2 ga-amaliteghachi "ngwụsị izu a" dị ka onye isi oche nke Cameroonian Football Federation (Fécafoot) gosipụtara taa. Ndị klọb kwụsịrị ịgba egwu n'ihi enweghị ...
ndị omenkà na-ekwu na opekata mpe ijeri FCFA 25 site na azụmaahịa na ndị ọrụ
TELES RELAY	 Jul 26, 2021 0
Mgbe ọnwa isii nke na-ele anya gafee Cameroon, Kọmịshị Pụrụ Iche maka Iweghachite nke rightghachi Nwebisiinka gosipụtara na n'etiti ndị na-akwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ ụgwọ ụgwọ bụ ụlọ ọrụ atọ na-akụ. Ndị a ...
Cameroon na-arụ ọrụ iji zipu usoro agụmakwụkwọ ya na Equatorial Guinea
Ndị bi na Equatorial Guinea ga-enwe ohere nke ịgbaso usoro ọmụmụ ụlọ akwụkwọ dịka usoro agụmakwụkwọ Cameroon. Dabere na Ministry of External Relations (Minrex), Cameroon ka nwetara ala ...
ka Mbarga Atangana si gba mbọ iwe iwe ndị na-azụ ahịa
Na July 21 na Yaoundé, Mịnịsta nke Azụmaahịa (Mincommerce), Luc Magloire Mbarga Atangana, duziri nzukọ na ndị na-eme ihe nkiri metụtara ịbata nke ngwaahịa na ahịa. Nke a…
Mba, nwanyị amụbeghị nwa 10 na South Africa
Ama ma ọ bụ onx na Echostech laghachiri na ozi dị na ntanetị. Nke a bụ onye South Africa a nke kwuru na ya mụtara ụmụ 10. Ndị mgbasa ozi South Africa kwupụtara, ozi a nwere ...
nbibi nke njiri mara nke ezigbo ọrụ bụ ihe na-enye nsogbu n’elu Ọchịchị
"Onye isi ala ahụ nwere oke nchegbu maka ngbasa nwayọ nwayọ na ogo nke ọrụ na ngalaba nkwukọrịta". Onye Mịnịsta nke Post na Nkwukọrịta (Minpostel), Minette Libom…
1 2 3 ... 37 esote